Filoha Hery Rajaonarimampianina : “ Zava-dehibe ny fananantsika fotodrafitrasa maharitra” -
AccueilRaharaham-pirenenaFiloha Hery Rajaonarimampianina : “ Zava-dehibe ny fananantsika fotodrafitrasa maharitra”
14/07/2018 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Tafapetraka eny Anosiala, distrikan’Ambohidratrimo ny trano vaovaon’ny SALAMA, izay ivon-toeram-pitantanana sy famatsiana fanafody ary fitaovam-pitsaboana ho an’ireo tobim-pahasalamam-panjakana eto Madagasikara. Fotodrafitrasa izay midadasika amin’ny velaran-tany 16 000 metatra toradroa, ka afaka manafatra sy mampirina ary mamatsy fanafody betsaka kokoa. Tonga nitokana izany tamin’ny fomba ofisialy, omaly, ny Filoham-pirenena Rajaonarimampianina Hery mivady, notronin’ny masoivohon’ny vondrona eoropeana sy frantsa, ary ireo mpikambana sasantsasany ao amin’ny governemanta. Amin’ny maha ivon-toeram-pitantanana sy famatsiana fanafody ary fitaovam-pitsaboana ny SALAMA dia hamatsy ireo tobim-pahasalamana ho an’ny daholobe, sy ireo fikambanana tsy miankina misehatra amin’izany resaka fahasalamana izany amin’ny famatsiana fanafody, ny fitaovam-pitsaboana manaraka ny kalitao amin’ny vidiny mirary. Ny fahaiza-manaon’ny SALAMA dia ahafahana manatsara ny tolotra, tafiditra amin’izany ny kalitao sy ny fanafody mba hahazoana ny mari-pankasitrahana ISO 9001 avy amin’ny “Association africaine des centrales d’achats des médicaments essentiels”.
Ho an’ny Filoham-pirenena, Rajaonarimampianina Hery, ny fotodrafitrasa vaovao SALAMA dia manampy amin’ny fanatsarana ny sehatry ny fahasalamana. “Taratry ny fampandrosoana iriana ao anatin’ny sehatry ny fahasalamana izao fotodrafitrasa izao, ary mampiseho ihany koa ny maha-zava-dehibe ny tetikasa fanorenana. Amin’izao fanatsarana eo anivon’ny SALAMA izao, dia mandroso any amin’ny fanatanterahana ny “couverture santé universelle” izao ezaka ataon’i Madagasikara izao. Izay efa mandeha amin’ny alalan’ny “Caisse nationale de solidarité pour la santé”. Ireo ezaka rehetra ireo izay tafiditra ao anatin’ny vinan’ny Fisandratana. Zava-dehibe ny fananana fotodrafitrasa maharitra toa izao. Ny fahatontosana izao fotodrafitrasa izao ihany koa dia hahatsapana fa tena salama ny fifandraisana eo amin’ireo mpiara-miombon’antoka ara-bola sy ara-teknika. Noho izany, miantso anareo mpiasa ato amin’ny SALAMA mba hitandrina sy hikolo ity toerana ity, hanao antsakany sy andavany ny asa nampiandraiketana anareo satria iankinan’ny fahasalaman’ny mponina rehetra », hoy ny Filoham-pirenena, Rajaonarimampianina. Marihina fa tafiditra ao anatin’ny fanamarihana ny faha-20 taonan’ny SALAMA izao fitokanana izao. Fotodrafitrasa mitentina 16 miliara Ariary ny teti-bidin’ny fanamboarana ny fotodrafitrasa, izay ny vondrona eoropeanina no namatsy ny 66 isan-jato, raha ny Afd (Agence française pour le développement) ny 12 isan-jato, ny 22 isan-jato kosa avy amin’ny vola madiodion’ ny SALAMA ary ny fanjakana kosa no niantoka ny TVA.
Nitsidika ny « rocade ouest »
Taorian’ny fitokanana ny trano vaovaon’ ny SALAMA tany Anosiala dia tonga nitsidika ny fivoaran’ny fanamboarana ny « rocade ouest » eny Ambohidratrimo ihany koa ny Filoham-pirenena. Iray amin’ireo fotodrafitrasa goavana, izay hitondran’ny sinoa ny fahaiza-manaony sy ny traikefany mba hateza tsara rehefa vita. Rocade telo lehibe araka izany no hamboarina miaraka amin’ny governemanta sinoa eto Antananarivo izay hanamaivanana ny fifamoivoizana eto an-drenivohitra rehefa vita afaka 20 volana eo ho eo. Mirefy 16 km eo ity « rocade ouest » ity, ary eo amin’ny 35 isan-jaton’ny asa no efa vita amin’izao fotoana izao. Ao anatin’izany ny asa fanomanana, asa fandaminana ny tany, ireo asa lehibe toa ny fanaovana tetezana, ny asa fanamboarana ny lalana amin’ny ankapobeny ary ireo asa fametrahana mari-pamantarana sy ireo kojakoja. Amin’ny oktobra 2018 ho avy izao kosa no vinavinaina ho vita ny asa rehetra. Ny minisiteran’ny Asa vaventy sy ny fotodrafitrasa kosa no tompomarika amin’ny fanamboarana, ny orinasa China Road and Bridge corporation Madagascar office no miandraikitra ny asa, ary vatsian’ny fanjakana malagasy sy ny Exim Bank vola.